अपराध | eawadhpost.com
तीन थुनुवा हिरासतबाटै फरार !
July 15, 2019	Leaveacomment 521 Views
बाँकेको धनौलीवाट प्रहरी हिरासतमा रहेका तीन जना थुनुवा फरार भएका छन् । ईलाका प्रहरी कार्यालय धनौलीको हिरासतमा रहेका खजुरा ४ का १८ बर्षिय सिमन बि.क, खजुरा ३ का १९ बर्षिय निर्मल थापा र उज्वल कार्की शनिवार राती १२ बजे फरार भएका हुन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका अनुसार ईलाका प्रहरी कार्यालय धनौलीको हिरासतमा चारजना थुनुवा रहेपनी तिनजना शौचालयको भेन्टिलेटरको ग्रिल तोडेर भागेका हुन । ‘चार जना मध्य कतब्य ज्यान मुद्धाका आरोपी त्यही छन’ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बिर बहादुर ओलीले भने ‘घटना लगत्तै म आफै त्यहाँ पुगेर हेर्दा भेन्टिलेटरको ग्रिल भित्रपट्टी कपडाले छोपेर राखेको अवस्थामा भेटीयो ।’ ...
डुडुवा प्रकरण : अदालतको आदेशमा कांग्रेस कार्यकर्ताहरु रिहा
July 10, 2019	Leaveacomment 365 Views
डुडुवा गाउँपालिकामा भएको मारपिटको घटनामा पक्राउ परेका नेपाली कांग्रेसका ५ जना कार्यकर्ता रिहा भएका छन् । ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा चलाइएका पाँच जनामध्ये ३ जनालाई १०/१० हजार रुपैयाँ धरौटी र २ जनालाई साधारण तारेखमा जिल्ला अदालत बाँकेले रिहा गर्न आदेश दिएको हो । रामकुमार यादव, गणेश यादव र दिनेश यादवलाई धरौटीमा तथा सलिम खाँ र असिफ खाँ साधारण तारेखमा रिहा भएका हुन् । रिहा भएका कार्यकर्ताहरुलाई नेपाली कांग्रेस बाँकेले बुधबारै पार्टी कार्यालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी स्वागत गरेको थियो । जहाँ पार्टी सभापति किरण कोइरालाले प्रहरी/प्रशासनले सत्ताको आडमा पूर्वाग्रही तरिकाले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई फसाउन खोजेपनि अदालतबाट न्यायको आभाष भएको प्रतिक्रिया दिइन् ...
June 29, 2019	Leaveacomment 342 Views
June 20, 2019	Leaveacomment 1,103 Views
June 20, 2019	Leaveacomment 440 Views
ठूलो परिमाणमा अफिमसहित चार जना पक्राउ
June 19, 2019	Leaveacomment 219 Views
बाँके प्रहरीले ठूलो परिमाणमा लागुऔषध अफिमसहित ४ जनालाई पक्राउ गरेको छ । बुधबार बिहान नेपालगन्ज वडा नं. २२ पुरैनीबाट साढे १८ केजी अफिमसहित चार जना कारोबारीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ पर्नेमा जाजरकोटको त्रिवेणी नलगाड नगरपालिका बस्ने ५० बर्षीय पृथ्वी बहादुर बिक, २५ बर्षीय बीर बहादुर बिक, २५ बर्षकै राजेन्द्र बिक र पूर्वी रुकुम उत्तरगंगा नगरपालिका–९ मैकोटकी ४९ बर्षीया शर्मिला मगर छन् । प्लास्टिकमा बेरिएको अफिमसहित रिक्सामा चढेको अवस्थामा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको थियो । रिक्सा चालकलाई पनि प्रहरीले सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिएको छ । बरामद अफिम जाजरकोटबाट ल्याईएको र भारततर्फ निकासी हुन लागेको भन्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्न आएको ...
June 4, 2019	Leaveacomment 748 Views
सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेड नेपालगन्जमा भएको भनिएको करिब २६ करोड रुपैयाँ अपचलनका मुख्य आरोपी संस्थाका बैंकिङ प्रबन्धक अरुणकुमार पाठकले आफुलाई फसाइएको दावी गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके परिसरमा मंगलवार पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै पाठकले आफूले बाहिर प्रचार गरिएजस्तो सहकारीको २२ करोड रकम अनियमितता नगरेको दावी गरे । जेष्ठ ५ गतेदेखि फरार भएका पाठकले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्रकारहरुमाझ आफ्ना कुराहरु राखेपछि प्रहरी समक्ष आत्मसमपर्ण गरेका थिए । पाठकले आफूलाई परिवन्दमा पारेर धोकाधडीपूर्ण तरिकाले संस्थाको संचालक समितिले २२ करोडको कागज गराएको पनि जिकिर गरेका छन् । ‘मैले यति ठूलो रकम अनियमितता गरेकै छैन । निष्पक्ष छानबिन होस् त्यसपछि मेरो ...
June 4, 2019	Leaveacomment 456 Views
गोर्खा राइफल्स अन्तर्गत भारतीय सेनामा भर्ती गरिदिने भन्दै लाखौं रकम असुल्ने सात जना नेपालगन्जमा पक्राउ परेका छन् । नेपालगन्जको होटल वाटिकाबाट उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख नायब उपरीक्षक प्रकास सापकोटाले जानकारी दिए । पक्राउ पर्नेमा ५ पुरुष र २ महिला छन् । पुरुषहरु पूर्व भारतीय सेना भएको पनि प्रहरी नायब उपरीक्षक सापकोटाले बताए । प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा ५ जना भारतीय सेनामा छनौट गराईदिने भन्दै रकम असुलेको थाहा भएको र महिलाहरुको भने अहिलेसम्म संलग्नता नदेखिएको पनि प्रहरी नायब उपरीक्षक सापकोटाको भनाई थियो । पक्राउ परेकाहरुको साथबाट ३८ लाख रुपैयाँ बरामद भएको छ । उजुरी गर्न अहिलेसम्म कोही पनि ...
बर्दिया कारागारका कैदी नेपालगन्जमा भेटिएपछि…
May 31, 2019	Leaveacomment 560 Views
बर्दिया जिल्ला कारागारमा सजाय भुक्तान गरीरहेका एक कैदी नेपालगन्जमा ‘घुमिरहेको’ अवस्थामा पक्राउ परेका छन् । उपचारका लागि नेपालगन्ज आएका भनिएका कैदी रबि पुनलाई ५ नम्बर प्रदेश प्रहरी ब्यूरोको टोलीले पक्राउ गरेको हो । कर्तब्य ज्यान मुद्दामा सजाय काटिरहेका पुन बर्दिया जिल्ला कारागारका चौकीदार समेत हुन् । नेपालगन्जबाट पक्राउ परेका पुनलाई शुक्रबार नै बर्दिया पठाईसकिएको छ । बर्दिया जिल्ला कारागारले भने पुन घुम्न नभई उपचारका लागि नेपालगन्ज गएको दाबी गरेको छ । बर्दिया जिल्ला कारागारका सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद पोखरेलले कारागारको सुरक्षा शाखाले पुनलाई प्रक्रिया पु¥याएरै उपचारका लागि नेपालगन्जमा पठाएको दाबी गरे । अवध पोस्ट्सँग कुरा गर्दै ल्याब असिस्टेन्ट समेत रहेका ...
सहकारी वित्तीय संस्थामा २५ करोड अपचलन : बैंकिङ कारोबार बन्द, अध्यक्ष पक्राउ !
May 26, 2019	Leaveacomment 1,291 Views
नेपालगन्जस्थित सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेडमा २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी अपचलन भएको छ । सहकारी वित्तीय संस्थामा कार्यरत केही कर्मचारीबाट यति ठूलो परिमाणको रकम अपचलन भएको संस्थाको सञ्चालक समितिले जनाएको छ । ग्राहकको करिब ५२ करोड रुपैयाँ मौज्दात जम्मा गरेको संस्थामा २६ करोड रुपैयाँ अपचलन हुँदा बचतकर्ताहरुले जम्मा गरेको रकम निकाल्न पाएका छैनन् । बचतकर्ताहरुलाई दिने रकम नभएपछि आईतबारदेखि संस्थाको बोर्ड बैठकले बैंकिङ कार्यालय नै बन्द गरेको छ । बचत रकम झिक्न नपाएपछि ग्राहकहरु आईतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर आफ्नो बचत फिर्ता गराईदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा निवेदन दिएका छन् । सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेडमा एउटै व्यक्तिको ३० लाख रुपैयाँसम्म ...